Ho any amin'ny fizarana
Download FaceTime Fa Window PC, Mac, Chromebook sy iPad
Ahoana ny fampiasana Skype amin'ny Android Fitaovana
Aprily 18, 2020 ny Facetime Guide Leave a Comment
Microsoft dia nekena ho iray amin'ireo mpanjifa fara herintsika-mirona rindrambaiko orinasa. Efa nandefa fandaharana foana izay afaka mitondra mora foana sy tsy hanahirana ny ny mpampiasa. Mba hampahaleotena azy hatrany mifandray amin 'ny izao tontolo izao, hanao hafatra an-tsoratra, ary ny fitondran-peo lahatsary na antso, Microsoft no natao ny fampiharana goavana be ofisialy fantatra amin'ny anarana hoe Skype noho ny Android mpampiasa.
Skype for Android tablette
Araka ny fanadihadiana, mihoatra ny 250 tapitrisa mpampiasa mampiasa Skype ho fitaovana ny fifandraisana. Ary ny isan'ny mpampiasa dia mitombo azy isan'andro noho ny mahomby fampisehoana. Ity fampiharana ny Microsoft dia manome fahafahana anao interconnect akory va ny mpampiasa mampiasa Skype. Mila fotsiny ianao tsara fifandraisana aterineto na finday angon-drakitra mba hiditra eto amin'izao tontolo izao ny fifandraisana amin'ny Skype.
Ny finday Android dia afaka aoka ianao hiresaka amin'ny olona izay tianao, fa noho ny fanampian'ny Skype, Azonao atao koa ny horonan-tsary fifandraisanareo amin'ny hafa mpampiasa. Ity rindrambaiko manokana dia revolutionize koa ho an'ny Android mpampiasa. Raha te-ny tanteraka nahazatra Skype ho an'ny Android mpampiasa, ny dingana sy ny fampiasana, ny endri-javatra sy tia mifaninana miavaka sisiny foana avy eo mamaky ity lahatsoratra mahasoa.
Afaka mahazo io effortlessly Skype malaza rindrambaiko amin'ny android fitaovana amin'ny alalan'ny fanarahana dingana tsotra
Mandehana milalao fivarotana eo amin'ny fitaovana Android sy ny Search for Skype na Download avy ao amin'ny rohy nomena ETO.
Tsindrio eo amin'ny hametraka bokotra ny downloading sy fametrahana ny Skype.
Rehefa efa nametraka ny fampiharana, ankehitriny dia tsindrio ary hahazo voasoratra anarana amin'ny fampiharana
Ianao dia tsy maintsy hiditra amin'ny mailaka kaonty ary tenimiafina.
Azonao atao ny mampiasa ny efa misy kaonty fa raha tsy manana dia manao vaovao.
Fidio ny Skype Name, izay ampiasaina ho toy ny Skype ID manomboka miantso.
1.1 Add Contacts & ho Call
1.2 Endri-javatra ny Skype:
1.3 High-Quality Video & Audio Antso:
1.4 Screen Sharing amin'ny Skype
2.0.1 Fifaninanana Edge ny Skype:
3 Skype fitaovana ho an'ny rehetra:
3.0.1 Skype ho an'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto antso
3.1 Antsoy amin'ny tariby & Phone Mobile Numbers Amin'ny Skype:
Add Contacts & ho Call
Fa fanampiana fifandraisana amin'ny Skype, dia ho hitanao ny tontonana izay mampiseho ny mpampiasa izay efa mampiasa Skype ary mifandray amin'ny ny e-mail kaonty. Ny fomba iray hafa dia afaka hafatra na e-mail na iza na iza mampiasa Skype ary afaka manampy ny Skype ID hanomboka miantso ny tsirairay.
Afaka manampy izay fifandraisana amin'ny alalan'ny fisafidianana Add ny olona eo amin'ny tena sakafo ny Skype. Azonao atao ihany koa ny manampy ny mpampiasa ilaina amin'ny fanoratana fotsiny ny Skype anaram-pikambana ary avy eo manindry eo manampy fifandraisana. Ankoatra izany, ianao koa dia afaka manao ny lisitry ny be mpampiasa indrindra mifandray amin'ny fampidirana azy ireo ao an-manampy ny endri-javatra amin'ny toerana tena. Azonao atao ihany koa ny hanakana na manala fifandraisana noho ny fiainana manokana sy ny filaminana ankapobeny.
Endri-javatra ny Skype:
Skype amin'ny Microsoft manompo ny mpanjifa miaraka amin'ny manam-paharoa antony izay milaza hoe: Hi amin'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao.
Ny hevitra ambadiky dia ny hampihenana ny elanelana ka ataovy velona tsara ny adin-tsaina-maimaim-poana ho an'ny olona mbola mifandray. Izany no tena mahasoa hijanona mifandray amin'ny fianakavianao sy ny fikambanana rehefa tsy afaka mifandray azy ireo ara-batana.
Skype manana afa-po be lisitry ny mpanjifa. Isan'andro, an-tapitrisany ny olona mampiasa ny Skype mba hiresaka na miantso ny olon-kafa. Dia fanatitra Skype endri-javatra miavaka ao anatin'izany.
High-Quality Video & Audio Antso:
Sensibly Skype dia natao mba hanome ny tsara izay rehetra azontsika atao avo-peo lahatsary sy ny antso ho amin'ny mpanjifa ny vokatra. Afaka hiaina ny kristaly lahatsary sy ny feo miantso manerana izao tontolo izao.
Ny ampahany tsara indrindra dia, Skype manome ny toetra optimum vokatra na ny olona iray na vondrona antso antso. Tsy maintsy ho azo antoka fa mampiasa tsara fifandraisana aterineto mba tsy hanelingelina rehetra ao amin'ny lahatsary na feo antso.
Screen Sharing amin'ny Skype
Izany no tena mahasoa endri-javatra natolotry ny Skype. Noho ny fanampian'ny fizarana efijery, dia afaka mizara ny famelabelarana conveniently, sary, antontan-taratasy na inona na inona nandritra ny antso.
Izany no manan- mahasoa ho an'izao tontolo izao ny orinasa. Mpiara-miasa dia afaka mizara ny antontan-taratasy manan-danja, na antontan-taratasy, Asehoy ny fampahafantarana, tetikasa tsipiriany, fitondran-tena famakafakana, ny takian'ny mpanjifa, ary ihany koa dia afaka hamaha ny olana mandritra ny antso.
Raha te-hanafina ny amin'ny chat, na miantso na inona na inona antony fiarovana na manokana, dia afaka manao izany mora foana amin'ny alalan'ny Skype. Izany dia manome fahafahana ny rindrambaiko manana miresaka manokana amin'ny farany hatramin'ny farany dingana encryption.
Raketo an-tsoratra ny antso:
Skype koa dia mamela anao mba hanoratra ny lahatsary na ny antso peo. Izany no mahasoa rehefa te-tsoratra izay hafatra na fotoana sarobidy. SIDA ihany koa ny fianarana sy manamarika nidina ny hevitra izay hita ao mandritra ny antso.
Ity endri-javatra ihany koa ny orinasa miasa ho an'izao tontolo izao, raha te-hihaino ny mpampianatra na ny lehibeny torolalana indray, dia afaka manao izany mora foana amin'ny alalan'ny fijerena ny fandraisam-peo ny antso.
Fifaninanana Edge ny Skype:
Skype dia nanompo ny mpanjifa ho mihoatra noho ny 10 taona. Microsoft izay ny Refaita teo io tsena mifaninana no vokarina ity lahatsary ity rindrambaiko an-telefaonina izay manompo kokoa ny endri-javatra izay mpifaninana hafa toy ny fotoana face, Google Duo, sns. tsy hamonjy. Izany no antony fampiharana ity dia iray amin'ireo fampiharana be mpampiasa indrindra manerana izao tontolo izao. Ny endri-javatra dia ahitana fifaninanana malaza
Skype fitaovana ho an'ny rehetra:
Raha tsorina dia, Skype dia natao ho an'ny Android mpampiasa finday ao anatin'izany ny Android, Android takelaka, sy ny fampiharana Android. Fa ny mahaliana dia Skype anjara Azo ampiasaina amin'ny vokatra hafa rehetra ihany koa ao anatin'izany ny Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Blackberry, ary ny takela-bato sy ny finday avo lenta Apple. Raha toa ka misy fitaovana anareo fotsiny mba télécharger Skype ary dia afaka mahazo iray amin'ireo lahatsary ifandrimbonana indrindra telephony fampiharana.
Skype ho an'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto antso
Iray hafa mifaninana singa io Skype faratampony fampiharana no tsy afaka miantso ny olona ihany izay amin'ny aterineto, fa koa miantso hatao mifandray amin'ny olona tsy manana fifandraisana aterineto. Skype no manolotra izany Premium tolotra ho any amin'ny mpampiasa ny manao miantso finday isa sy ny telefaona an-tariby isa.
Fa mahazatra antso an-tserasera, tsy manana mandoa na inona na inona. Ny ilainao dia ny fifandraisana aterineto mba hametraka ny antso. Saingy ho an'ny niantso tamin'ny finday isa na telefaona an-tariby isa, Skype nasain'i tena ara-toekarena ho amin'ny mpampiasa famandrihana. Malaza hafa soa Skype noho ny mpampiasa dia
Afaka mametraka antso ho amin'ny fianakavianao, mpiara-miasa na namana na aiza na aiza maneran-tany. Skype no fanatitra tena vola-drafitra mahomby antso ho an'ny firenena samy hafa manerana izao tontolo izao.
Ankoatra ny Android mpampiasa, ireo endri-javatra ireo fitaovana azo ampiharina amin'ny rehetra anisan'izany ny biraonao, iPhone, Xbox, OSX sy ny maro hafa
Skype mamela ny mpanjifa fomba maro mba handoavana ny famandrihana ao anatin'izany Visa, Master karatra, JCB, PayPal, Antsinjarany, Apple In-App Purchase, American Express, Western Union sy ny maro hafa
Ny dingana Tena mora. Ianao fotsiny tsy maintsy mandoa ny famandrihana, ary avy eo dia misintona ny Skype sy ny fampiharana manomboka miantso amin'ny lahatsary tsara indrindra telephony rindrambaiko.
Antsoy amin'ny tariby & Phone Mobile Numbers Amin'ny Skype:
Mba ho Skype-to-telefaona an-tariby antso ao amin'ny Skype mampiasa ny finday Android dia mila Skype voninahitra.
Click on the Skype credit link mba hanampy Skype bola ny kaonty.
Raha toa ka tsy manana Skype bola ary miezaka ny hanao ny Skype-to-telefaona an-tariby antso, Skype will send you a pop-up to top-up your account.
Azonao atao na ny hahazo famandrihana isam-bolana Skype, na dia afaka mampiasa ambony-up-ny iray eny fandoavam-bola.
Hanorina famandrihana isam-bolana, raha Skype no ampiasaina isan'andro noho ny antso iraisam-pirenena. You will need a debit card for the subscription process.
Choose the amount of Skype credit you would like to add and tsindrio eo amin'ny 'foana'.
Tsindrio eo amin'ny boaty foana ary manomboka mameno ao amin'ny billing antsipirihany voasoratra anarana ny debit karatra.
Mividy ny bola ary ianareo dia vonona ny hampiasa ny Skype.
Ary amin'izany dia efa nividy ny sasany Skype voninahitra dia afaka manomboka miantso isa telefaona an-tariby na finday.
Manomboka, click on the phone icon araka ny hita ao amin'ny sary eto ambany.
Miantso ny isan'ny tianao ny hiresaka amin'ny nanampy ny fehezan-dalàna ao amin'ny firenena tsirairay avy sy ny Tsindrio eo amin'ny Call Button.
Ahantòny rehefa atao amin'ny antso.
Mba hametraka telefaona an-tariby maro Tsindrio eo amin'ny "Add maro ' then enter the landline number you wish to add to your list.
Manantena fa efa nametraka ny Skype App soa aman-tsara. Raha miatrika olana misy, Mitete ny olana eo amin'ny fanehoan-kevitra boaty. Ny fanontaniana dia ho voavaha haingana araka izay azo atao. Araho ny dingana rehetra mitandrina faharetana, you will surely be able to use Skype very easily.
Hamarino ny Skype sy ny Facetime Comparison 2020
Fomba mora ampiasana sy fametrahana Facetime ao amin'ny i-Pad
Fomba tsotra amin'ny fampiasana FaceTime amin'ny Apple Watch
Ahoana ny fampidinana ny FaceTime ho an'ny Windows
Vonjeo ny anarako, mailaka, ary ny vohikala amin'ny navigateur ity ho amin'ny manaraka I Hevitra.
Karohy ny tranonkala ...
Ahoana ny fampiasana Apple Watch ho an'ny mozika tsy misy telefaona
Copyright © 2020 · Magazine Pro amin'ny Genesis Framework · WordPress · Hiditra
Mampiasa tranonkala ity mofomamy mba hanatsarana ny fiainanao. Ho izahay mihevitra ianao maninona izany, nefa afaka misafidy-out raha tianao. Cookie FikiranaMANAIKY
ilaina Always afaka